साउदी अरबमा कोरोनाको कारण १८४ जनाको मृत्यु, कस्तो छ अन्य खाडी मुलुकको अवस्था ? – RemitKhabar
साउदी अरबमा कोरोनाको कारण १८४ जनाको मृत्यु, कस्तो छ अन्य खाडी मुलुकको अवस्था ?
काठमाडौं । हालसम्म साउदी अरबमा कोरोनाको कारण १८४ जना मानिसको ज्यान गइसकेको छ, भने २७ हजार ११ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
त्यस्तै खाडी मुलुक कतारमा यो समाचार तयार पार्दासम्म १५ हजार ५ सय ५१ जना मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको र १२ जना मानिसको कोरोनाको कारण ज्यान गइसकेको छ । त्यस्तै आज मात्र ६ सय ७९ जनामा थप कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
त्यस्तै अर्को खाडी राष्ट्र कुवेतमा कोरोनाको कारण यो समाचार तयार पार्दासम्म ३८ जना मानिसको ज्यान गइसकेको छ । भने त्यहाँ ४ हजार ९ सय ८३ जना मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । साथै ती मध्ये १ हजार ७ सय ७६ जना उपचार पछि निको भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै अर्को खाडी मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएइमा कोरोनाको कारण हालसम्म १२६ जना मानिसको ज्यान गइसकेको छ, भने १४ हजार १ सय ६३ जना मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोनाको कारण विश्वभर २ लाख ४७ हजार ३३ जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । भने ३५ लाख ३९ हजार ६ सय ५४ जना मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यस्तै विश्वभर स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्कनेको संख्या ११ लाख ४७ हजार ५ सय ८९ जना रहेका छन् ।